Blackberry VS iPhone iyo Sida loo soo biiray BlackBerry si iPhone
A Guide Full inuu ku biirayo ka BlackBerry si iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5s / 5c
Sidaas aad raadineyso weeyna phone cusub iyo waa dildillaacsan yihiin dhexeeya Blackberry oo iPhone? Just cusboonaynta BlackBerry si iPhone, laakiin ay ku adag tahay in wareejinta content ka BlackBerry si iPhone? Way ku adag tahay in ay qabsadaan iPhone ka qabo BlackBerry waqti dheer, gaar ahaan Rasuul BlackBerry u fiican? Wax kasta oo xaaladdu tahay, waxaan hubaa in aad ka heli doontaa waxa aad rabto in aad ka dib markii reading this article.
Qaybta 1. Transfer ka BlackBerry si iPhone
Qaybta 2. barnaamijyadooda BlackBerry u iPhone
Qaybta 3. ringtones BlackBerry u iPhone
Qaybta 4. BlackBerry Z10 VS BlackBerry Q10 VS iPhone 5
Ka dib markii la barbardhigo, aad rabto in aad iska ilaawaan aad BlackBerry jir ah u iPhone ah, laakiin ku xayiran garoonka kala iibsiga ka kooban? Ha welwelin. Waa kuma sidii ay weheliyaan sida aad sameeyey gurmad ah ee aad BlackBerry in kombiyuutarka la Desktop BlackBerry® ee Software heshiis weyn. In this article, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso sida loo soo ceshano xiriirada iyo xitaa SMS ka faylka gurmad ay sameeyeen Desktop BlackBerry® ee Software iyo wareejiyo si aad iPhone ku haboon iyo effortlessly.
Blackberry in Transfer iPhone, wax ka yar 10 daqiiqo
Ceshano faylka gurmad Blackberry oo ku jira si aad iPhone, phone Android iyo telefoonka Nokia Symbian wareejiyo fudayd.
Bedelka xiriirada ganacsiga iyo xiriir shakhsi ee laga BlackBerry si iPhone si fudud.
La shaqee si fiican u la iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 3GS / 4 in ay maamulaan macruufka 9/8/7/5/6.
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada iyo fariimaha qoraalka ka BlackBerry si iPhone
Tallaabada 1. kaabta aad BlackBerry la BlackBerry® Desktop Software
Si aad u bilaabaan oo leh, rakibi Desktop BlackBerry® ee Software kombiyuutarka. Waxay u ordaan oo isticmaali cable USB in ay ku xidhmaan aad BlackBerry in computer. Marka BlackBerry la aqoonsan yahay oo muujiyey in uu furmo, guji Back ilaa hadda in ay gurmad xogta shakhsiga ku saabsan BlackBerry in computer.
Fiiro gaar ah: Ka bood tallaabo marka aad sameeyey gurmad horeba. Intaa waxaa dheer, Lugood waa in lagu dhejiyaa kombiyuutarka in ay hubiyaan in shaqada Wondershare MobileTrans habboon.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone in kombiyuutarka
Download iyo rakibi BlackBerry in ay iPhone software wareejinta xogta kombiyuutarka. Isticmaal ah USB cable Apple in aad iPhone ku xiran. In uu furmo suuqa hoose, tag Soo Celinta ka hab kaabta oo guji. In ay menu, dooro ka BlackBerry file gurmad .
Tallaabada 3. Nuqul SMS iyo xiriirada ka BlackBerry si iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5s / 5c
Ka dib markii la aqoonsan yahay, aad iPhone u muuqataa in uu furmo. Dhinaca bidix, guji saddexagalka rogay si ay u muujiyaan liiska jiido-hoos. Dooro BlackBerry file gurmad . Markaas, dhammaan faylasha gurmad aad weligaa sameeyey BlackBerry® Desktop Software waxay ku qoran yihiin baxay.
Dooro kuwa aad doonayay. Sida aad ka arki, xiriirada iyo SMS waxaa lagu saxay. Haddii aad rabto in aad kaliya si ay u gudbiyaan xiriirada ka BlackBerry si iPhone, waxaad u baahan tahay inaad uncheck SMS . Si aad labada wareejiyo, waxaad si toos ah riixi kartaa Start Copy .
Qaybta 2. app BlackBerry u iPhone
Ugu dambeyntii, waxa aad maamuli in ay beddelaan BlackBerry si iPhone ah, laakiin ma doonayo in aan ka tago wax kasta oo Chine socodyada aad BlackBerry ka dambeeya, oo ay ku jiraan BlackBerry Messager app, app BlackBerry Ringtone oo dheeraad ah. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijyadooda telefoonka BlackBerry waa gebi ahaanba ka duwan kuwa iPhone, sida aad u sii wadi kartaa in ay isticmaalaan barnaamijyadooda aad jeceshahay telefoonka BlackBerry? Ha welwelin. Halkan, waxaan ku tusi dhib qaar ka mid ah, waxaan rajaynayaa in ay idin caawin kara.
1. Rasuul BlackBerry u iPhone
Blackberry Rasuulkiisa , BBM marka la soo gaabiyo, waa app fariimaha deg dega qalabka BlackBerry. Sidaa daraadeed, aad awoodo inuu dhawro dhow la xiriiri qoysaska iyo saaxiibada aad. Waxa aad siisaa awood ay uga soo diraan fariimaha deg dega ah la video, note cod iyo sawiro oo waxaad ka samaysaa cod call for free. Dareen farxad in la isticmaalo app iyo ma doonayo in aan u gadaashiisa kaga tegi doono ka dib markii uu ka soo wareegaya BlacBerry si iPhone? Ha welwelin. Waxaad isticmaali kartaa Rasuul ka BlackBerry on iPhone aan su'aal kasta.
2. BlackBerry Rasuulkiisa u dajinta iPhone
Si aad u soo bixi Rasuul BlackBerry u iPhone, waxa aad furan kartaa Lugood iyo xiriiriyaan iPhone in computer via cable USB. On galeeysid bidix, guji Lugood Store > App Store . Waxaa Goobidda iyo download it in Lugood Library. Markaas, guji si aad iPhone si ay u muujiyaan guddi gacanta ay. Riix Apps tab oo ku xidh si aad iPhone.
3. BlackBerry Rasuulka kale oo loogu talagalay iPhone
Ka sokow app Rasuul ku xusan for blackberry iyo iPhone, halkan waa app kale Rasuul caan ah oo la odhan jiray WhatsApp Rasuulka . Mar kasta oo aad 3G ama WiFi waxaa daaray, waxaad isticmaali kartaa WhatsApp si qoraal qoysaska iyo saaxiibada aad. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo dirto oo aad hesho farriimo, sawiro, qoraalo audio iyo video farriimaha si fudud.
Ka sokow BlackBerry Rasuulka iyo WhatsApp Rasuulkiisa, waxaa tahay qaar ka mid ah Chine in ay leeyihiin hawlaha la mid ah wada adiga iyo qoysaska iyo saaxiibada soo dhex chat. Waxay tahay KIK Rasuulkiisa , ChatPlus , Touch ™ , Hookt , Viber .
Ma badbaadiyey ringtones badan oo ku saabsan telefoonka BlackBerry jir ah oo hadda doonaya in ay u gudbiyaan si aad iPhone? Nasiib darro, ringtones yihiin qaabab .mp3, taas oo aan si toos ah sida ringtones on iPhone loo isticmaali karo. Maxaa laga qaban karaa? Ha welwelin. Halkan waa qaab fudud oo ay ka soo kaa caawin. Raac tallaabooyinka fudud ee hoose, oo waxaan kaa dhigi doonaa effortless.
Tallaabada 1. dhoofinta ringtones telefoonka ah BlackBerry in computer iyo abuuro gal ah si ay u badbaadin. Fur Lugood iyo guji Files si ay u muujiyaan in ay menu jiido hoos. Dooro dar Folder inay Library ... Browse your computer si aad u hesho folder meesha ringtones waxaa lagu badbaadiyey iyo iyaga dajiyaan in Lugood Library.
Tallaabada 2. Raadi playlist u keeno iyo hoos si ay u doortaan ringtone ah sida mid aad rabto in aad isticmaasho aad iPhone. Midig u guji ringtone iyo in ay liiska hoos-hoos dooran Hel Info . In wada hadal pop-up ah, guji Options tab. Eegala Time Start iyo Close Time oo iyaga sax. Markaas, riix OK .
Tallaabada 3. midig u guji ringtone la mid ah markii labaad oo ay doortaan Abuur AAC Version . Dagsan ee aan sidaa yeelno, ringtone ka kartoo in .m4a tusi doonaa in playlist ah,. Jiid iyo hoos si aad u computer.
Tallaabada 4. Isku day in isbedel lagu kordhiyo ka .m4a in .m4r. Haddii aadan si toos ah u arki karaan kordhinta, waa inaad muujisaa kordhin ugu horeysay. Guji Start > Control Panel . Sawirka u samaynta iyo wax ka heli Imaanshaha iyo shaqsinimo . Waxaa Riix oo markaas dooran Folder Options . In wada hadal pop-up ah, guji View iyo uncheck Qari kordhin noocyada file yaqaan . Riix Codso iyo OK . Markaas, heli ringtone laga dhoofiyey iyo isbedel lagu kordhiyo ka .m4a in .m4r.
Blackberry Z10 waa smartphone touchscreen ah, ordaya BlackBerry OS 10. Waxaa awood aad kala soo bixi barnaamijyadooda, kulan, music, videos, joornaallo, buugag iyo ka badan u madadaalada si fudud. Waxaad ka qaadi kartaa sawiro, edit iyo iyaga oo aad effortlessly wadaag saaxiibadaada. Keyboard touchscreen ayaa si deg deg ah u barto style makiinada aad iyo aad u siinayaa talooyin halka aad qortid si ay u caawiyaan si degdeg ah aad ku qor.
Blackberry Q10 sidoo kale waa smartphone touchscreen ah, laakiin waxa ay u muuqataa dhaqan. Waxa aad bixisaa keyboard QWERTY jirka, taas oo kuu ogolaanaysaa inaad nooca wax effortlessly. Waxay ku siinaysaa fududahay in aad email-ada helaan iyo kuu ogolaanaysaa inaad inuu u dhawyahay oo dhan muhiim ah in aad. By isticmaalaya BBM video, aad xitaa ka arki kartaa qof kasta oo aad rabto in aad la kulanto iyo sawiro via browser.
iPhone 5 , jiilka lixaad ee iPhone-ka, waa mid aad u khafiif ah oo la safeeyey. Waxa kale oo hore iPhone ay ku maamulaan macruufka 6 iyo isticmaali A6 habka, kaas oo ku siinaya waayo-aragnimo cajiib ah iyadoo la isticmaalayo.
Ma rabtaa in ay qaado telefoonka ka mid ah BlackBerry Q10, BlackBerry Z10 ama iPhone 5, laakiin weli ma oga oo ka mid ah waa ka sii wanaagsan, BlackBerry Q10, BlackBerry Z10 ama iPhone 5? Fiiri kiniin ah oo kuu sheegi doona waxa kala saxda ah ka mid ah saddex casriga ah?
Nooca Device smartphone smartphone smartphone
OS OS BlackBerry 10 OS BlackBerry 10 macruufka 6
Taariikhda sii daayay January, 2013 January, 2013 September, 2012
Cabirka 130 x 65.6 x 9 mm 119,6 x 66.8 x 10,35 mm 23.8 58.6 x x 7.6 mm
Resolution 768 x 1280 pixels 720 x 720 pixels Pixels 640x1136
Touchscreen Haa Haa Haa
Kaydinta Gudaha 16GB 16GB 16GB
Kaydinta fideysa Haa (microSD) Haa (microSD) No
Front jeeda camera 2 megapixels 2 megapixels 1.2 megapixels
Camera Rear 8-megapixel 8-megapixel 8-megapixel
Nooca LED LED LED
Waqtiga hadal 600 oo min 810 min 480 min
Mar daaran 18,300 min 21.312 min 13,500 oo min
Accelerometer, tignoolaji, Compass, iwm Haa Haa Haa
Wi-Fi Haa Haa Haa
Bluetooth Haa, v 4.00 Haa, v 4.00 Haa, v 4.00
Sida loo soo biiray BlackBerry in Android?
Sida loo dhaqaaq Faylal ay ka BlackBerry in Samsung?
Sida loo Copy Xogta laga Android inay iPhone?
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka iPhone si iPhone?
The Best Apps Free on iPhone?
> Resource > iPhone > A Guide Full inuu ku biirayo ka BlackBerry si iPhone